Okufakiwe- IYunivesithi yaseHodges - Ukwamkelwa
Ivenkile Yoncumo lweAmazon
Isidanga kunye noPhando lweNkqubo yesiQinisekiso
Izatifikethi zesidanga sokuqala
Inkqubo yo kwamkelwa
Ukubala amaxabiso eNet
Inqubomgomo Yobumfihlo Yewebhusayithi
Udidi lwekhosi: Ifakiwe
Ukubonisa i-1-9 yeziphumo ezi-11
Funda ukunxibelelana njengePro ngesiDanga soNxibelelwano lobuNgcali.
Ezezimali-Ukubhalisela ukuwa ngo-2021!
Zilungiselele ikamva elifanelekileyo lokutyala imali nge-BS yezeMali.
Thatha ikhondo elinomdla lokufumana isidanga sobulungisa kulwaphulo-mthetho.
Umdibaniso woBugcisa kwiMfundo Jikelele
Yenza eyakho iNdlela ngeDigri kwiZifundo eziBanzi.
Zuza isiNgesi sakho njengoLwimi lweSibini (ESL) iSatifikethi namhlanje.
Inqanaba lokuPhakama ngesiDanga soLawulo.
Isayensi yeKhompyuter kunye neTekhnoloji yoLwazi lweKhompyuter
Qalisa uKamva kwiTekhnoloji ngeeDigri zeNzululwazi yeKhompyuter
Unyango lwezeMpilo yoNyango
Inkqubo yeNgcebiso ngeMpilo yeNgqondo eQinisekisiweyo ye-CACREP.
Fumana isiDanga soLawulo lweShishini kwiSikolo samaShishini aPhezulu.